Dhalinyaro af-duub loo heystay oo Guudlaawe lagu wareejiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Dhalinyaro af-duub loo heystay oo Guudlaawe lagu wareejiyay
Madaxwaynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa maanta lagu wareejiyay dhalinyaro ka soo jeedda magaalada Baladweyne oo bishii hore lagu af duubtay inta u dhaxeysa degmooyinka Matabaan iyo Baladweyne.
GURICEEL, Soomaaliya - Odayaasha Dhaqanka ee degaankoodu yahay magaalada Guriceel ayaa Cali Guudlaawe ku wareejiyay Afar wiil iyo gawaari af-duub ahaan loogu heystay degaano hoos taga Matabaan, waxaana la sheegay in odayaashu ay maleeshiyaadkii heystay dhalinyarada u geeyeen lacag madax furasho ah.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in ku dhawaad Lixdan Kun oo dooral ay qaateen maleeshiyadii afduubka geysatay, Madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe iyo Madaxwaynaha Galmudug Qoor-qoor ayaana qeyb ka mid ah bixiyay lacagtaas.
Dhawaan ayay ahayd markii maleeshiyo ku sugan duuleedka degmada Maxaas ay sidaan kale af-duub u geysteen dhalin yaro reer Galgaduud ah oo safar u soo ahaa Muqdisho, isla markaana lagu soo daayay madax furasho.
Masuuliyiinta labada maamul ee Galmudug iyo HirShabeelle oo goobta dhalinyarada maanta lagu wareejinayya ka hadlaya ayaa sheegay in loo baahan yahay gogol nabadeed ay isgu yimaadaan odayaasha dhaqanka labada beel ee xurguftu ka dhaxeyso.